တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ၊ ရုရှားနိုင်ငံတွင် ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော အလတ်စား ခရီးသည်တင် လေယာဉ် MC-21 စမ်းသပ်နေမှုများအား သွားရောက် လေ့လာကြည့်ရှု(ရုပ်သံသတင်း) » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
သြဂုတ် ၁၆၊ ၂၀၁၉ သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ၊ ရုရှားနိုင်ငံတွင် ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော အလတ်စား ခရီးသည်တင် လေယာဉ် MC-21 စမ်းသပ်နေမှုများအား သွားရောက် လေ့လာကြည့်ရှု(ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပြီး ရုရှားနိုင်ငံတွင် ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော အလတ်စားခရီးသည်တင်လေယာဉ် MC-21 စမ်းသပ်နေမှုများအား သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုသည်
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၁၆
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် International Army Games-2019 ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ၊ ရုရှားနိုင်ငံတွင် ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော အလတ်စား ခရီးသည်တင် လေယာဉ် MC-21 စမ်းသပ်နေမှုများအား သွားရောက် လေ့လာကြည့်ရှု
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆၁) စစ်လက်ရုံးရွေးချယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်စိစစ် ရွေးချယ်၊ စစ်တက္ကသိုလ်စာပေဌာနမှ နည်းပြပါမောက္ခ၊ ကထိကအ ရာရှိကြီးများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများအားတွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား
သြဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်အဖွဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ(ရုပ်သံသတင်း)
အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၉ Admin 0
လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည်နှင့်ပြည့်စုံသည့် အရာရှိကောင်းများ မွေးထုတ်
စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
မေ ၁၃၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Saurabh Kumar အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဂျိုးဖြူတပ်နယ် နှင့် ကွင်းကောက်တပ်နယ်ရှိ တပ်မတော်တန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းများရှိ နည်းပြ အရာရှိ၊ စစ်သည်များ နှင့် သင်တန်းသား အရာရှိ၊စစ်သည်များအား သီးခြားစီ တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြား(ရုပ်သံသတင်း)
ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပူနေးမြို့ရှိ National Defence Academy(NDA)သို့ ရောက်ရှိလေ့လာ (ရုပ်သံသတင်း)
ဇူလိုင် ၂၇၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ရန်ကုန်တပ်နယ်မှ တပ်မှူးများ၊ နည်းပြအရာရှိကြီးများ၊ မဟာသိပ္ပံသင်တန်းသားများ၊ ဗိုလ်လောင်းများ၊ သင်တန်းသားများနှင့် ဆေးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ဆုံအမှာ စကားပြောကြား (ရုပ်သံသတင်း)
သြဂုတ် ၁၄၊ ၂၀၁၉ Admin 0